Ny BLU Products dia mamarana ny fitsangatsanganana ao Espana | Androidsis
Ny BLU Products dia mamarana ny fitsangatsanganana ao Espana
Ahoana no fanisanay tato anatin'ny herinandro Ny fahatongavan'i BLU any Espana dia miha manakaiky hatrany. Ilay orinasan-tsarimihetsika finday maimaimpoana mahomby indrindra eto amin'ny kaontinanta amerikana. Ary izany amin'ny alàlan'ny seho iray lehibe toy ny baolina kitra, ary Valencia CF, dia efa nisy teto amin'ny firenentsika hatramin'ny nanombohan'ny vanim-potoana.
Miaraka amin'ny katalaogera izay misongadina ambonin'izy rehetra mahatalanjona fifandanjana eo amin'ny fahombiazan'ny vokatra sy ny vidiny mirary. Manisa amin'ny finday avo lenta izay manome fahombiazana avo lenta sy avo lenta nefa tsy mahafoy ny endriny. Ary izany amin'ny ankapobeny dia ho hita tsy ho ela, ireo maodeliny rehetra, ambanin'ny roanjato euro.
1 BLU dia hitondra vaovao mahaliana amin'ny elanelam-potoana Android
2 Tsy ho ela dia hanana maodely BLU efatra any Espana isika
BLU dia hitondra vaovao mahaliana amin'ny elanelam-potoana Android
Amin'ny fisafidianana ny firenentsika ho fidirana amin'ny tsena Eoropeana, mikasa ny hampiroborobo ny votoatin'ny marika izy ireo. Tolotra terminal tsara kalitao amin'ny vidiny mirary. Io no lakilen'ny fahombiazany tany Etazonia sy Amerika Latina. Ary io no hitohy ny filokana any Espana sy amin'ny fanitarana eoropeanina ho avy.
Na dia eto amin'ny firenentsika aza Blu dia mbola tsy fantatra dia natolotra ny faneken'ny efa mpitarika amin'ny varotra finday maimaim-poana any Etazonia. Ao amin'ny tsena anjakan'ireo olona goavambe teknolojia BLU dia naka ampahany lehibe amin'ny orinasa fivarotana finday avo lenta. Ny tsiambaratelony, manolotra vokatra tsara tohanan'ny fanompoana serivisy aorian'ny varotra tsara foana.
Amin'ny diany vaovao, ny BLU Products dia mikasa ny tsy hivadika amin'ilay hevitra ara-barotra nahomby. Y hanana serivisy fiantohana sy ivon-toerana fanamboarana manokana eto amintsika. Toy ny amin'ny fizarana ny karazana kojakoja sy kojakoja rehetra. Ka ny fividianana smartphone BLU dia mahafapo araka izay azo atao.
Tsy ho ela dia hanana maodely BLU efatra any Espana isika
Araka ny efa nolazainay taminao tato anatin'ireto herinandro ireto, afaka nizaha toetra ny maodely sasany izahay fa tsy ho ela isika dia afaka mividy any Espana. Ary hatreto dia samy manaiky ny hanome traikefa tena tsara ho an'ny mpampiasa izy rehetra. ny BLU R2ary ny BLU Live 5R, Ny roa amin'ireto terminal ireto izay nasainay vintana notsapaina dia nivadika ho solventsy niasa toa ny nisehoany tamin'ny taratasy. Tsy very maina, Anisan'ireo terminal 10 be mpividy indrindra tamin'ny taon-dasa tany Etazonia tamin'ny alàlan'ny Amazon, ny 4 amin'izy ireo dia terminal terminal BLU.
Tsy isalasalana ny tarehimarika sy ny angona izay mitarika fidirana tsara an'ity orinasa ity eo amin'ny tsenanay. BLU dia manolotra antsipiriany izay tian'ny mpampiasa ary ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no dokam-barotra lehibe indrindra. ny terminal famaranana metaly, SIM roa, ary ny fampidirana mpiaro tranga sy efijery. Antony hanampiana isa isa ao amin'ny sehatry ny fifaninanana masiaka. Tsy ho ela dia hanana daty ofisialy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny BLU Products dia mamarana ny fitsangatsanganana ao Espana
Ny efijery Pixel 2 dia manome olana vitsivitsy
Google no mety ho bankinao manaraka